Mozilla inovandudza kudzora zvakavanzika mu Firefox 65 | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla inovandudza Firefox nguva dzose uye nekutenda nebasa revagadziri vanonakidza, nguva dzese dzatino bhurawuza riri nani. Uye chinhu chakakosha kwazvo munguva dzino, nekuitwa kunonakidza kwekuvandudza kuchengetedzeka kwedu uye kuvanzika, chimwe chinhu chinokosheswa uye chiri kushaikwa mune dzimwe nzira dziripo. Neraki Mozilla haina hanya nechikamu ichi uye nhasi tine nhau dzakanaka dzekukuudza nezvazvo ...
Uye ndeyekuti Mozilla yakavandudza kudzora kwekuvanzika kweshanduro yeiyo Firefox 65 dandemutande. Iyi vhezheni itsva yeFirefox inoita kuti zvive nyore kune vashandisi kumisikidza sarudzo dze wega. Izvi zvichaita kuti zvive nyore uye zvive nyore kune vashandisi kuti vanzwe zvakati "kusazivikanwa" pavanenge vachivhura pawebhu, kunyangwe izvo hazvireve kuti isu tinoregeredza chengetedzo kana isu tiri 100% takavimbiswa kuti yedu yega inodzorwa ... Izvo zvisina hurongwa!
Firefox yakavhurwa muna Ndira 29, 2019, iyo yekutanga yakatopa ongororo dzayo dzekutanga uye maonero pamusoro pekuvandudzwa kwakaunzwa. Saka kana iwe uri mumwe wevanonamata uye iwe usati yakagadziridzwa, Ndinokurudzira kuti uzviite. Pamusoro pekuvandudzwa kwakanangana nehupombwe, kuyedza kwakatariswawo kune mamwe mafonti ekuvandudza zvimwe zvinhu zvakawanda. Naizvozvo, iwe unowana zvakagadziriswa zviputi zvaive mune zvekare shanduro, kumwe kugadziridza, nezvimwe, mune yako yaunofarira yakavhurika sosi browser.
Kana iri yekuedza ne kuvandudza zvakavanzika, ndiko kusangana kwekugadziriswazve kutonga kubvumidza vashandisi kuti vazvizive pachavo zviri nyore uye nekumisikidza iyo nhanho yekuchengetedza zvakavanzika zvavanoda. Kudzora kwepachivande chikamu chekuedza kukuru kweMozilla kwekuvandudza kuchengetedza kwekutevera kwevashandisi vewebhu. Uye zvimwe zvakawanda izvo zvinouya muFirefox 66 sezvatakataura mune ino blog mazuva mashoma apfuura ...
Mamwe ruzivo nekutora - Yepamutemo Webhu
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mozilla inovandudza kudzora zvakavanzika muFirefox 65